Sida loo Bilaabo Shirkad guuleysta | Martech Zone
Sida loo Bilaabo Shirkad guuleysata
Axad, Juun 28, 2009 Douglas Karr
Sanadkii la soo dhaafay waxaan la shaqeynayay ganacsi lamaanayaal qaar ah. Bilaabida meheraddu waxay ahayd mashruucii iigu adkaa, uguna qaalisanaa, iyo waqti-lumis ah. Waxaan lahaa shuraako iyo alaabooyin horay loo iibiyay, laakiin waxaan kahadlayaa aasaasida shirkad ubaahan maalgashi, shaqaale, macaamiil, iwm. Maaha hiwaayad - ganacsi dhab ah.
Qayb ka mid ah sanadkii la soo dhaafey waxay ka shaqeyneysay goobo ganacsato ah oo iyagu ganacsigooda wata ama shirkado bilaabay. Nasiib ayaan u leeyahay inaan saaxiibo badan ku yeesho wareegyadaas. Wadno wadaag ayaan ku la yeeshay sheekooyinka wadnaha badankood - dhammaantoodna waxay igu dhiirrigeliyeen inaan ka boodo.
Sideed ku bilaabi kartaa ganacsi guuleysta? Lacag kor u? Samee shey? Hel liisankaaga ganacsi? Ma helaysaa xafiis?
Weydii ganacsade kasta waxaadna heli doontaa jawaab ka duwan. Qaar ka mid ah la-taliyayaasheena ayaa nagu riixay inaan helno qoraal meeleyn badeecadeed iyo inaan bilowno wareeg rasmi ah oo lacag ururin ah. Tani ma ahayn quusin qaali ah oo lagu furayo ganacsi! Waxaan bilownay shirkad mas'uuliyad xaddidan leh iyo PPM, laakiin salka ayaa ka dhacay suuqa oo lacag uruurinta ayaa hakad gashay.
Tan iyo waagaas, waxaan si fudud uga shaqeynay mashaariic dheeri ah oo aan ku maalgalino ganacsiga nafteena. Marka dib loo fiiriyo, ma hubo haddii PPM uu ahaa tallaabada koowaad ee saxda ahayd. Waxaan ku dhufannay dhulka socodsiinno fara badan oo biilal sharci ah oo aan lahayn nooc horudhac ah. Waxaan u maleynayaa haddii aan dib u rogi lahaa waqtiga, inaan isku duubnaan lahayn kheyraadkeena oo aan bilaabi lahayn horumar.
Way fududahay in lagu sharxo meherad ku hareeraysan badeecad tusaalaha sheyga. Helitaanka isku-darka ganacsiga dhabta ahi wuxuu ahaa fikrad wanaagsan… haddii aad leedahay wax ka badan hal milkiile. Haddii aadan sameyn, ma hubo inaad u baahan tahay illaa uu macmiilka ugu horreeya garaaco. Marka laga hadlayo PPM (tani waa xirmo la siiyay maalgashadayaasha), ha ka welwelin taas ilaa aad dhab ahaantii yeelato maalgaliye.
Qorshe ganacsi? La-taliyayaasheena badankood waxay noo sheegeen inaan ku fariisano qorshaha ganacsiga oo aan ka shaqeyno, taa bedelkeeda, helitaanka soo bandhigid aad u gaaban oo wadajir ah oo lala beegsaday maal-gashadaasheena. Ma heshay maalgaliye jecel ROI? Higaada sheekada ROI. Maalgaliye jecel inuu dunida wax ka beddelo? Ka hadal sida aad u beddeleyso adduunka. Shaqo siiso dad badan? Ka hadal koritaanka shaqada ee shirkaddaadu samaynayso.
Kuma jah wareerin wadada aan qaadnay, kaliya ma aaminsani inay tahay tan ugu fiican. Ganacsatada leh shirkad guuleysata oo ku hoos jirta suunka waxay leeyihiin waqti aad u fudud oo ay ku bilaabaan shirkadda xigta. Maalgashadayaashu ficil ahaan ayey kuugu faanaan dhammaantiin iyo dadka ugu dambeeya ee aad ka dhigtay kuwa hodanka ah waxay rajeynayaan fursadda xigta ee aad bilaabeysid.
Jawaabta oo gaagaaban ayaa ah in mid kasta oo ka mid ah dadka aan aqaano uu maray waddo aad u kala duwan oo ay ku bilaabayaan shirkadooda. Qaarkood waxay dhisteen badeecada oo macaamiil baa timid. Qaar baa lacag ka amaahday bangiyada. Qaarkood waxay ka amaahdeen asxaabta iyo qoyska. Qaarkood waxay heleen lacag deeq ah. Qaarkood waxay aadeen maalgashadayaasha…
Waxaan u maleynayaa habka ugu weyn ee loo bilaabo shirkad guuleysata inay tahay inaad ka shaqeysid waddo aad dareento inaad ku qanacsan tahay… oo aad ku dheganaato. Isku day inaadan u oggolaan dadka dibedda (gaar ahaan maal-gashadayaasha) inay saameyn ku yeeshaan jihada aad u socoto. Waa jihada ay tahay inaad ku guuleysato qaadashada.
Inkasta oo midkoodna macallimiinteennu isku raacsanayn sida in la sameeyo, dhammaantood waxay isku raaceen in aan waa in samee… oo hadda samee. Marka… waxaan nahay!